बाहिर निस्किदै हुनुहुन्छ ? सावधान यी पाँच वटा प्रदेशमा प्रर्देछ ‘भारी वर्षा — Imandarmedia.com
बाहिर निस्किदै हुनुहुन्छ ? सावधान यी पाँच वटा प्रदेशमा प्रर्देछ ‘भारी वर्षा
काठमाडौँ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मनसुनी वायुको प्रभावले मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ । महाशाखाले हाल देशभर सामान्यदेखि पुर्ण बदली रहेको जनाएको छ । प्रदेश १, वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरुमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ।